Vaovao - Fitaovana fananganana scaffoldes mifamatotra
Ny fampitaovana scaffolding mifamatotra dia karazana haitao scaffold vaovao namboarina haingana tamin'ny fiandohan'ity taonjato ity, izay misy akony lehibe amin'ny fivoaran'ny teknolojia fananganana eto amin'ny fireneko. Izy io dia mamadika ny asa any an-toerana ho fiasa ambany, ary manova ny fiatoana mihantona ho fiasa anaty ao anaty ny frame. Izy io dia manana atiny ambany karbaona, haitao avo lenta, ary ara-toekarena, azo antoka kokoa ary mety kokoa.
1. Karbaona ambany
Mitsitsia ny 70% amin'ny fanjifana vy
Tehirizo 95% ny fanjifana herinaratra
Mitsitsia 30% -n'ireo fihinana fampiasa amin'ny fanamboarana
Azo ampiharina amin'ny vatan'ny tranobe maherin'ny 45 metatra. Arakaraka ny maha avo ny gorodona no miharihary ny toekarena, ary ny trano tsirairay dia afaka mamonjy 30% -60% amin'ny vidiny.
Azo ampiharina amin'ny vatan'ny rafitra maro samihafa
Ny fampiasana ny rafitra fanaraha-maso mandeha ho azy tanteraka sy ny rafitra fanaraha-maso lavitra dia afaka misoroka mavitrika ny toe-javatra tsy azo antoka, ary mampiasa fitaovana fiarovana anti-fianjerana karazana kapila marobe mba hisorohana ny tsy fahombiazana toy ny tsy fahombiazan'ny fitaovana famerenana, izay azo antoka fa ny fefy miaro foana amin'ny fanjakana azo antoka ary hahomby amin'ny fisorohana ny fianjerana.
Ny rafitra fanaraha-maso teknolojia enti-miasa microcomputer dia afaka mampiseho ny satan'ny fampiakarana amin'ny fotoana tena izy ary manangona ho azy ny sandan'ny enta-mavesatra isaky ny toerana misy ny milina fanandratana. Rehefa mihoatra ny 15% amin'ny sandan'ny famolavolana ny enta-mavesatry ny milina sasany dia hanaitra azy ho azy izy ary hampiseho ny toeran'ny fanairana amin'ny endrika feo sy hazavana; rehefa mihoatra ny 30% dia hijanona ho azy ny vondrona fitaovana fampiakarana mandra-pialan'ny lesoka. Izy io dia misoroka an-tsakany sy an-davany ny loza mety hitranga amin'ny fiarovana azo avy amin'ny be loatra na fatiantoka mavesatra loatra.
5. Fanamboarana mekanika
Fantaro ny fiasan'ny tranobe ambany sy ny fampiasana avo. Izy io dia mivory eo ambanin'ny vatan'ny trano lehibe indray mandeha, mifamatotra amin'ny trano ary manatsara hatrany ny fitomboan'ny haavon'ny gorodona. Ny fizotran'ny asa rehetra dia tsy mitana crane hafa, izay manatsara be ny fahombiazan'ny fanamboarana, ary manome endrika mahaolona kokoa ny tontolon'ny tranokala, ary mora kokoa ny fitantanana sy ny fikojakojana, misongadina kokoa ny vokatry ny asa sivilizasiona.
Vahao ny fisehoan-javatra misavorovoro amin'ny scaffolding nentim-paharazana, ataovy fohy sy mahazatra kokoa ny endrika ankapobeny amin'ny tetikasa fananganana, ary afaka mampiseho amin'ny fomba mandaitra sy mivaingana kokoa ny endrika azo antoka sy sivilizin'ny tetikasa fananganana.
Fizaran-tsarimihetsika Ringlock, Scaffold Ringlock adidy mavesatra, Fehikibo Scaffolding Ringlock, Jack screw azo ovaina, Kwikstage Fitaovana fikolokoloana, Sifotra amin'ny fantsom-by vy,